First mobile interbank service introduces in Myanmar | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceFirst mobile interbank service introduces in Myanmar
First mobile interbank service introduces in Myanmar
Onepay သည် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်အချင်းချင်း ငွေလွှဲနိုင်သည့် mobile inter-bank serviceကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများဖြင့် မေလ ၄ရက်နေ့တွင် တရား၀င်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ် (AGD ဘဏ်)၊ ဧရာဝတီဘဏ် (AYA ဘဏ်)၊ သမဝါယမဘဏ် (CB ဘဏ်)၊ ကမ္ဘောဇဘဏ် (KBZ ဘဏ်)၊ မြန်မာရှေ့ဆောင်ဘဏ် (MAB ဘဏ်)၊ ယူနိုက်တက်အမရဘဏ် (UAB ဘဏ်) နှင့် ရိုးမဘဏ်တို့ကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချပေး နိုင်ရုံသာမက ငွေလွှဲရန်အတွက် ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ရန်မလိုဘဲ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြား ငွေလွှဲခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေတဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး လုံခြုံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်ဘဏ်ဖြစ်တဲ့ AGD ဘဏ်ရဲ့ နည်းပညာအထောက်အပံ့နဲ့ မိုဘိုင်းမှတဆင့် ဘဏ်အချင်းချင်း ငွေလွှဲတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားဖို့ ခြေလှမ်းနောက်တစ်လှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘဏ်အချင်းချင်းငွေလွှဲတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သုံးစွဲသူတွေက ဝန်ဆောင်ခအပိုကုန်ကျစရိတ်တွေ ထပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ငွေလွှဲတဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေလွှဲခအတိုင်းပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး တော့ Onepay app က သုံးစွဲသူတွေကို ငွေလွှဲမှုကို အတည်မပြုခင်အဆင့်မှာ ကျသင့်မယ့် ငွေလွှဲခပမာဏကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Onepay app ကနေငွေလွှဲလိုက်ပြီး တစ်ဖက်က လက်ခံသူရဲ့ ဘဏ် account ထဲကို ငွေရောက်ဖို့ ရုံးဖွင့်ရက် ၂ ရက် အချိန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု One Pay Company Limited ၏ ဒုတိယမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဇေယျမျိုးက ပြောသည်။
Onepay ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ငွေဖြည့်ရန်အတွက် AGD ဘဏ်ငွေစာရင်းကို အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ e-commerce မှတ်ပုံတင်ထားသော မည်သည့်ဘဏ်၏ MPU ကတ်ကိုမဆို အသုံးပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ Visa သို့မဟုတ် MasterCard များကို အသုံးပြု၍ သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဘဏ်စာရင်းနှင့် ကဒ်မရှိပါကလည်း နီးစပ်ရာ 123 ဝန်ဆောင်မှု ရသည့် ဆိုင်များနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ Onepay ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်များတွင် ငွေဖြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“Onepay ရဲ့ တရားဝင်မိတ်ဖက်ဘဏ် အနေနဲ့ ADG ဘဏ်က Onepay သုံးစွဲသူတွေလုပ်ဆောင်မယ့် ဘဏ်အချင်းချင်းကြားငွေလွှဲတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ငွေပေးငွေယူ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မိုဘိုင်းမှတဆင့် ဘဏ်အချင်းချင်းငွေလွှဲတဲ့ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းနည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးရလို့ အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Onepay နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေသားမဲ့ ငွေကြေးစနစ်ကို ပေါ်ပေါက်လာဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။” ဟု AGD Bank ၏ Chief Business Officer ဦးပြည်စိုးထင်က ပြောသည်။
Onepay app ကို android နှင့်ဖြစ်စေ၊ iOS နှင့်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး app ကို playstore နှင့် apple app store အသီးသီးမှ download ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Onepay launched the first mobile interbank service in Myanmar with the technical and operational support of its Official Banking Partner, Asia Green Development Bank (AGD), allowing users to transfer money between Asia Green Development Bank (AGD), Ayeyarwady Bank (AYA), Co-operative Bank (CB) Kanbawza Bank (KBZ), Myanma Apex Bank (MAB), United Amara Bank (UAB) and Yoma Bank.
The service allows users to transfer money between banks without going intoabranch. Atatime ofaglobal pandemic, this service reduces social contact and helps users avoid the hassle of going into branches.
“We want to make sure that our customers are havingasimple, secure and convenient experience while using our service. Working with our official banking partner, AGD Bank to support interbank services in our app is one of the attempts to reach that goal. The interbank service does not have any hidden costs or extra charges. Any costs associated with the remittance charges will be set by respective banks. The app is designed to notify the users of the transfer rate and cost before they confirm the transaction. Settlement will take up to two working days after the transaction has been made,” U Aung Zeya Myo, Deputy Managing Director of One Pay Company Limited, said.
Users can easily transfer money between banks by adding funds to their Onepay wallet. This can be done through an AGD bank account, or with any e-commerce enabled MPU, VISA or Mastercard.
Additionally, if users do not haveabank card or account, funds can be added by using cash-in services through 123 service or Onepay appointed agents throughout the country. This would then allow the user to simply transfer the amount from their wallet to one of the seven selected banks.
“As the official banking partner, AGD will manage the interbank transactions of Onepay users. We’re proud to provide banking service to this first mobile interbank service. We are ready to partner with Onepay to move forward in creating an integrated cashless processing system in Myanmar,” U Pyi Soe Htin, Chief Business Officer of AGD Bank, said.
Previous articleExposing yourself to the sun DOES NOT prevent COVID-19
Next articleMytel inks deal with Yangon City Bank for online tax payment